ကလေးတွေကို ဒီလိုကျွေးပါ - မွေးကင်းစ မှ အသက် ၁ နှစ် | Home
Home› Life› Health› ကလေးတွေကို ဒီလိုကျွေးပါ - မွေးကင်းစ မှ အသက် ၁ နှစ်› ကလေးတွေကို ဒီလိုကျွေးပါ - မွေးကင်းစ မှ အသက် ၁ နှစ်
ကလေးတွေကို အာဟာရပြည့်အောင်၊ အစားစားအောင် ဘယ်လိုကျွေးရမလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စက မိဘတိုင်းအတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးတစ်ဦးရဲ့ အသက် ၁ နှစ်ဆိုတဲ့ အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားဟာ ကလေးရဲ့ ကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ဥာဏ်ရည်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှစ်မျိုးလုံးအတွက် အရေးပါတဲ့ ကာလအပိုင်းအခြား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအချိန်မှာ သူတို့စားသောက်ရ တဲ့ အစားအသောက်တွေက ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၊ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်၊ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ် စတဲ့ကဏ္ဍအားလုံးအပေါ် အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်အထိ သက်ရောက်မှု ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေဖို့တော့ မလိုအပ်ပါဘူး။ အာဟာရဗေဒ ပညာရှင်များနဲ့ ဆရာဝန်တွေ အကြံပြုထားတဲ့ ကလေးတွေကို ဘယ်လို ကျွေးမွေးသင့်သလဲဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေရှိနေပါတယ်။ ဒီလမှာတော့ မွေးကင်းစ မှ အသက် ၁နှစ် အထိ ကလေးတွေအတွက် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအပြင် ပထမဆုံးဖြည့်စွက် အစားအစာများကို ဘယ်လို အဆင့်တွေနဲ့စတင်ကျွေးမွေးပေးသင့်သလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမ ၆ လ
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းက ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ ကလေးတစ်ယောက်အတွက် မွေးဖွားချိန်ကစပြီး အသက် ၆ လ အထိ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရအားလုံးနီးပါးကို မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေးရုံနဲ့ လုံလောက်အောင်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ မိခင်နို့မှာပဋိဇီဝပစ္စည်းတွေ၊ အင်ဇိုင်းတွေ၊ Antimicrobial ၊ Anit-inflammatory စတဲ့ ကလေးရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးကြီးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်သလို ကလေးရဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို တိုးတက်စေမဲ့ Fatty Acids လည်းပါဝင်ပါတယ်။ ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းက မိခင်ကိုယ်တိုင်အတွက်လည်း အကျိုးရှိစေပါတယ်။ ကလေးကို နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ်မှာ မိခင်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက Oxytocin နဲ့ Prolactin စတဲ့ ဟော်မုန်းတွေ ထွက်လာပြီး အဆိုပါဟော်မုန်းတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်တက်လာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ကျစေဖို့ အကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။
မိခင်နို့က ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးဆိုတာ သံသယဖြစ်စရာ မလိုပေမဲ့ အကယ်၍အကြောင်းတစ်မျိုးမျိုးကြောင့် ကလေးကို မိခင်နို့တိုက်ဖို့ အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ဖို့ ပညာရှင်တွေ တိုက်တွန်းအားပေးထားပါတယ်။ Formula-milk လို့ခေါ်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားအလိုက်လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေပါဝင်အောင် အထူးထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ နို့မှုန့်တွေရှိပြီး နို့မှုန့်တိုက်ကျွေးခံရတဲ့ ကလေးတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်တာ မတွေ့ရဘူးလို့ ပညာရှင်တွေ မှတ်ချက်ပြုထားပါတယ်။
မွေးစကနေ အသက် ၆ လအရွယ်ထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းသာ သောက်သုံးရမဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က သူ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို မိခင်နို့မှ တစ်ဆင့်သာ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အစားအသောက်နဲ့ အာဟာရဓာတ်က အရေးပါတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
မိခင်နို့ဟာ ကလေးတစ်ယောက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်အားလုံးကို ဖြည့်တင်းပေးဖို့ လုံလောက်တယ်ဆိုပေမယ့် မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ ကျန်းမာရေး အနေအထား၊ အစားအသောက် စားသုံးမှုပုံစံကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ ကလေးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အချို့သော အာဟာရဓာတ်တွေ ချို့တဲ့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိခင်ဖြစ်သူက ကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်တော်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို အာဟာရပြည့်ဝအောင် စားသောက်ပေးရမှာဖြစ်ပြီး အကယ်၍အသက် ၆ လ မှ ၁ နှစ် အသက် ၄ ကနေ ၆ လ မကျော်မချင်း ကလေးတွေရဲ့အစာချေစနစ်က အစာအများစုကို ချေဖျက်ဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်သေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတစ်ဦးဟာ မွေးကာစက ရှိထားတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ရဲ့ နှစ်ဆရှိလာပြီ၊ ခေါင်းထောင်နိုင်ပြီ၊ ထိုင်နိုင်ပြီ၊ အစာခွံ့ဖို့ ပြင်တဲ့အခါ ပါးစပ်ကလေးဖွင့်ပေးတဲ့ တုံ့ပြန်မှုမျိုးလုပ်နိုင်ပြီ၊ အစာကို မြိုချနိုင်ပြီဆိုရင် မိခင်နို့အပြင် အခြားဖြည့်စွက်စာတွေကို စတင်ကျွေးဖို့ သင့်တော်ပြီလို့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ကလေးအများစုက အသက် ၆ လအရွယ်လောက်မှာ အထက်မှာ ဖော်ပြထားတာတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်လာနိုင်လေ့ရှိပါတယ်။
ကလေးတစ်ဦး မိခင်နို့အပြင် အခြားဖြည့်စွက်စာတွေ စတင်စားနိုင်လာပြီဆိုရင် မိဘတွေ ကြုံလာရတဲ့ မေးခွန်းက ကလေးကို ဘာကျွေးသင့် သလဲ၊ ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို အစာစကျွေးတဲ့အခါမှာ မလောဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကလေးရဲ့ တုံ့ပြန်ပုံကို ကြည့်ပြီး အကယ်၍ ကလေးက အစာကို လက်မခံလိုသေးဘူးဆိုရင် အချိန်ခဏ ဆက်စောင့်ဖို့ ပညာရှင်တွေတိုက်တွန်းပါတယ်။ ကလေးကို ပြင်ပဖြည့်စွက်စာတွေကို စတင်ကျွေးမွေးတဲ့အခါ အစားအစာ အမျိုးအစားအလိုက်တစ်ဆင့်ချင်း ကျွေးမွေးသွားတာက မိဘဖြစ်သူအတွက် ကလေးကြီးလာတဲ့အထိ အစားအသောက်ကျွေးမွေးရ လွယ်ကူစေသလို မိခင်နို့စို့နေရာက အခြားအစားအသောက်တွေကို စတင်လက်ခံရမဲ့ ကလေးဖြစ်သူအတွက်ပါ သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါတယ်။
အဆင့် ၁ - ဆန်မှုန့်
ဆန်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အာဟာရမှုန့်နဲ့ မိခင်နို့၊ဒါမှမဟုတ် နို့မှုန့်နဲ့ ရောပြီးကျွေးတာက ကလေးအတွက် အစပိုင်းမှာ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက ကလေးရဲ့ အစာချေစနစ်အတွက်လည်း သင့်တော်ပြီး ဓာတ်မတည့်တာမျိုး ဖြစ်နိုင်ခြေ အနည်းဆုံး အစာတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခြားကောက်နှံတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အာဟာရမှုန့်တွေလည်းရှိပြီး ဆန်မှုန့်ကိုတော့ မိဘတော်တော်များများ ရိုးရာအဖြစ် ရွေးချယ်လေ့ရှိပါတယ်။
အဆင့်၂ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
ဆန်မှုန့်ကျွေးတာ အဆင်ပြေတယ်၊ ကလေးကလည်း ကောင်းကောင်းစားတယ်ဆိုတဲ့ အခါမှာ နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စတင်ကျွေးကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးရဲ့ အရသာခံ အာရုံအရ အစပိုင်းမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရဲ့ အရသာက တစ်မျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပေမယ့် အာဟာရဓာတ်ပါဝင်မှု များပြားတာကြောင့် မိဘြ ဖစ်သူက အနည်းငယ် အားစိုက်ပြီး ကလေးကို အကျင့်လုပ်ပြီး ကျွေးပေးသင့်ပါတယ်။ ဥနီ၊ ကန်စွန်းဥလိုမျိုး အရသာချိုတဲ့ အစားအစာမျိုးကို အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့ ရောထည့်ပြီး ကျေညက်နေအောင်ချေပြီး ကျွေးပေးနိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၃ - အသီးများ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို စတင်ကျွေးကြည့်ပြီးမှ အသီးတွေကို ကျွေးပါလို့ ကလေးအာဟာရဗေဒပညာရှင်တွေ အကြံပြုထားပါတယ်။ အကယ်၍ အသီးတွေကို အရင်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင် ကလေးလေးက သူစားရမဲ့ အစားအသောက်
အားလုံးက ချိုတဲ့အရသာရှိမယ်လို့ ထင်မှတ်ပြီး နောက်ပိုင်း အခြားအစားအစာ ကျွေးတဲ့အခါ အခက် အခဲကြုံတွေ့ လာရနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အရေးကြီး တဲ့ အချက်က ကလေးတစ်ဦးရဲ့ အစာချေစနစ်က ချိုတဲ့အသီးတွေမှာပါလေ့ရှိတဲ့ Fructose လို့ခေါ်တဲ့ သကြားဓာတ်ကို ကောင်းကောင်း မချေဖျက်နိုင်သေးတာကြောင့် ဝမ်းလျှောတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ငှက်ပျောသီး၊ သစ်တော်သီး၊ မက်မွန်သီး နဲ့ ပန်းသီးလိုမျိုး အသီးတွေကို စတင်ကြည့်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဆင့်၎ - ပရိုတိန်း
အထက်ဖော်ပြပါ အစားအစာတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ကျွေးပြီးနောက် အဆုံးမှာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ ပရိုတိန်းကို စတင်မိတ်ဆက် ပေးရတော့မဲ့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ပရိုတိန်းကို စတင်မိတ်ဆက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ ပရိုတိန်းဓာတ် ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ အသား၊ ပဲအမျိုးမျိုးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ကလေးကို စတင်ကျွေးတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အသားနဲ့ ပဲအမျိုးမျိုးကို ကျွေးမွေးဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာ မချက်ခင် သေချာစွာသန့်စင်ဆေးကြောဖို့နဲ့ လုံးဝကျက်သွားအောင် ချက်ပြုတ်ပေးဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို ကျွေးမဲ့အခါ ထမင်း၊ အသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အားလုံးကို Puree လို့ ခေါ်လေ့ရှိတဲ့ နူးညံ့တဲ့ အနှစ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိ ကြိတ်ချေပေးဖို့လည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အသက် ၆ လ မှ ၁ နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ဦးရဲ့ အစာချေလမ်းကြောင်းက ပရိုတိန်းကို အစပိုင်းမှာ လက်ခံဖို့ အချိန်အနည်းငယ်ယူရပြီး နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ ကလေးမှာဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းမာတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ စိုးရိမ်ဖို့မလိုဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ အသားကျသွားမှာပါလို့ ပညာရှင် တွေဆိုထားပါတယ်။
၁ နှစ် နဲ့ အထက်
ကလေး အသက် ၁နှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်တာ့ သူတို့အတွက် အစားအစာရွေးချယ်စရာက ပိုမိုများပြားလာပါပြီ။ ထောပတ်သီး၊ အစေ့အဆန် အမျိုးမျိုး၊ အသား၊ ကြက်သား နဲ့ ငါး၊ ကြက်ဥ အနှစ်၊ နွားနို့ နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်း၊ ဂျုံ စတဲ့ အစားအစာ အုပ်စုအားလုံးနီးပါးကို မျှတအောင် စတင်ပြီး ကျွေးလို့ရပါပြီ။
သတိထားသင့်တာကတော့ ကလေးကို အစားအသောက် အသစ်တစ်မျိုး စတင်ကျွေးမယ်ဆိုတိုင်းမှာ အဆိုပါ အစားအစာနဲ့ ကလေးရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်က ဓာတ်တည့်မှုရှိရဲ့လားဆိုတာကို စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အစားအသောက် တစ်မျိုးမျိုးကို ကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က လက်မခံလိုကြောင်း လက္ခဏာတွေ ပြသတဲ့အခါ ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး အကြံဥာဏ်တောင်းပါ။ လက္ခဏာတွေက ပြင်းထန်မှုမရှိဘူးဆိုရင် နောက်ထပ် ၃ လလောက်ကြာတဲ့အခါမှာ အဆိုပါ အစားအသောက်ကို ပြန်ကျွေးကြည့်ပြီး စောင့်ကြည့်ပါ၊ ကလေးက ပထမဆုံးအကြိမ် စကျွေးတုန်းက ဖြစ်ခဲ့သလို တူညီတဲ့လက္ခဏာ၊ ဒါမှမဟုတ် ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေပြခဲ့ရင် ဒီအစားအသောက်နဲ့ ဓာတ်မတည့်ဘူးလို့ယူဆပြီး ဂရုစိုက်ရတော့မှာပါ။ ၃ လ ကြာပြီး နောက်တစ်ကြိမ်ကျွေးတဲ့အခါမှာ ကလေးထံက သံသယဖြစ်စရာ ဘာတုံ့ပြန်မှုမျိုးမှ မပြဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်လက်ကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကလေးအခြေအနေကို ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ ဆရာဝန်တွေ အကြံပြုထားပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကလေးတွေနဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့ လက္ခဏာမျိုးပြလေ့ရှိတဲ့ အစားအစာတွေက ကြက်ဥအကာ (သို့) ကြက်ဥ၊ မြေပဲ၊ နွားနို့၊ ဂျုံ နဲ့ ပဲပိစပ်၊ ပဲနို့ စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Ref ; Infant nutrition: The best nutrition from birth to year one.
Relax N Refresh. There's no rush!
နုပျိုလိုခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က မှားခဲ့သည်များ